Tis ny vanim-potoan'ny Google Doodle dia mankalaza ny fetin'ny fialantsasatra - ITS
Tis ny vanim-potoan'ny Google Doodle dia mankalaza ny fetin'ny fialantsasatra
'Tis ny vanim-potoan'ny Google Doodle dia mankalaza ny fetin'ny fialantsasatra'
Tis ny vanim-potoana, google dia mankasitraka ny fanombohan'ny vanim-potoana Krismasy sy ny taom-baovao 2016.
VAOVAO VAOVAO VAOVAO VAOVAO ISAM-PARITRA VAOVAO ARA-PITSARANA ISAM-PARITRA Tianao ve ny hamaky an'ity lahatsoratra ity amin'ny teny %%? Google dia nandao ny doodle voalohany 'Tis ny vanim-potoana! hanamarihana ny fanombohan'ny vanim-potoanan'ny vakoka.
Google Doodle dia mankalaza ny fetin'ny fialantsasatra
'Tis ny fotoana ho an'ny melodie! Ny ririnina dia mitondra fomba amam-panao samihafa, na dia vitsy na sambatra toy ny karolingana aza. Niverina nandritra ny taona maromaro, ny hira voalohany dia niraikitra manokana tamin'ireo faritra voafaritra manokana, ary nozarain'ireo mpihinam-bitsika nandalo teo anelanelan'ny tanàna. Hatramin'ny tapaky ny 1800 dia ny fiaraha-miangatra raha toa ka mahatsikaritra izany isika, dia miparitaka manerana an'i Angletera sy Eoropa Andrefana.
Amin'izao fotoana izao, dia nanomboka nanamora ny fampisehoana ivelan'ny aterineto ireo vondrom-piarahamonina an-tanàn-dehibe izay nitendry hira ho an'ny tsirairay mba hikisaka amin'ny fandehanany.
'Tis ny vanim-potoana! dia toy izany ihany koa ny fanangonana rakikira Krismasy nataon'i Olivia Newton-John sy Vince Gill.
Ny Doodle androany dia ahitana vondron'ny mpihira mahafinaritra, miaraka amin'ny mpilalao horonantsary mipetraka matanjaka mandritra ny minitra. Raha ny mpijery iray dia mijery ny totozy eo amin'ilay doodle mahafatifaty, dia hitany ny hafatra hoe 'Tis ny Season sy ny mipoitra eo aminy dia mitondra anao any amin'ny pejin'ny pejy ho an'ny dikanteny mitovy amin'izany.
Tahaka ny tsy miova mandrakariva, dia afaka manantena isika fa hanambara tsikirity hafa isan'andro i Google isan'andro, izay midika hoe andro isaky ny vanim-potoana mafana.
Ny Desambra 23 dia noheverina ho ny andro voalohan'ny fotoan'ny Krismasy izay nodiavin'ny Krismasy sy Taom-baovao.
Raha manomana antokom-pihetseham-po kely hafa isika amin'ity herinandro ity, dia maniry ny olona rehetra hankalaza Krismasy sy toe-javatra mahatalanjona mialoha.
Fitsarana ambony Delhi: Ny mpitantana ny vondrona WhatsApp tsy tompon'andraikitra amin'ny votoaty
Ny fomba mahomby indrindra amin'ny fialana sigara avoakan'ny WordPress Site